Oduu ODP : Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddu jiru itti fufee jira. Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu ODP : Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddu jiru itti fufee jira.
Oduu ODP : Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddu jiru itti fufee jira.
Oduu ODP: Falmiin Lammaa fi Abiyyii jiddu jiru itti fufee jira.
Lammaan haga Oromoon hin tokkomne, ADP waliin tokkomuun hin taatu akkuma jedhetti jira. Haaluma kanaan, ODPn hayyoota Oromoo waliin mariin Bishooftuutti godhaa jira.
Mariin kun ODP, keessattu Lammaa fi Abiyyii dhaamsa cimaa ni dabarsa. ODP TOKKO TA’E JABAATE
BAHAA MOO NI QOODAMAA?
Ilaalchi Lammaa sabboontoota Oromoo biratti dhaggeettii fi deeggarsa guddaa argate. Ejjannoo sirna federaalizimii irratti inni qabu warri TPLF ni deeggara. Abiyyii Ahmad karaa badii itti jirurraa duubatti deebi’aa hin jiru. Oromoon jaalattee jibbite ADWUI tokkomuu deema.
TPLF ni ari’ama.
Aggaar dirijjiitiin ADWUI ni dabalamu.
MARII HAGA AMMAA MAAL FAKKAATTI?
Hanga ammatti, marii ADWUI waldoomsu irratti miseensi ODP tokkolleen hin argamne.
Deeggarsi Abiyyii guddaan Izeemaa fi ADP irra dhufa. Ijoolleen magaalaa yaada isaa guddoo faarsan.
Marii kan godhe hayyoota yunivarsitii ti: Izeemaa, ODP, ADP fi Dabuubii of keessaa qaba. Aggaar Dirijjiitiin WOMAA hin beektu.
Marii sadarkaa waajjira MM-tti ta’e.
ODP waan irra beekuu hin qabu.
Warri leenjii kennuu kan akka Addisuu Araggaa, Leencoo Baatii fi Fikaaduu Tassamaa waan ofii isaanii beekan hin qaban. Marii irratti hin hirmaanne. Qajeelfama MM kenneen daballee ODP leenjisan.
Maqaan dhaabaa haaraa hin murtoofne. Maqaan የኢትዮጵያ የብልጽግና ፓርት jedhu sobaa dha.
ODP ayyaana Irreecha baay’ee sodaachaa jirti.
Irreecha siyaasaaf itti fayyadamuuf karoora guddaatti jira.
Abiyyii huccuu aadaa bareedaa uffatee afaan sabboonummaa Oromoo dubbachuun Oromoo qabbaneessuuf ni carraaqa.
Qeerroolleen ni faarsa. Gadaallee ni faarsa.
Irreessi Finfinnees injifannoo ODP jedhe ni labsa.
ODP waliin Hegereen Oromiyaa fi Itoophiyaa cululuqa jedhe ni labsa.
Oduulee biraa hedduutti jira. Ammaaf kanuman sifeeffadhaa.
Namni dhugaa qabu yaada yaadan falma, kan dhugaa hin qabne nama arrabsa.Beekan G Erena
“Think big, start small, and scale fast,” Jim Carroll
Ashaagireen bakkanni waraabee fidee, akka ofii jedhetti dubbatu ilaalaa. Kanaan OPDO isaa fi uummata garaa bokoksaa oola.Dula Mulugeta Gute
Gross Human Right Violation by Dr. Abiy Ahmed government security agents and soldier in Oromia/ Ethiopia.
“Hoggantoota ODP Wajjiraalee Federaalaa